စနစ်တကျ စီမံကိန်းချပြီး လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်နေတဲ့ ရန်သူအစစ်က ဘယ်သူလဲ | Ko Rohingya
This entry was posted on March 24, 2013, in ဖဘတင်ခဲ့သည့် ဓာတ်ပုံများ, ဆောင်းပါး and tagged ချမ်းမြေ့, ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်း, ရခိုင်အကြမ်းဖက်ပါတီ, လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကြီး, လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်း, သားသတ်သမား. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← မိတ္ထီလာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကြီးအတွင်းကနေပြီး သက်စွန့်ဆံဖြား ပြေးလာကြရတဲ့ ရန်ကုန်ရောက် အပြစ်မဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲ။
အချိန်မလင့်မှီ လုပ်သင့်တာကို လုပ်ကြစေချင်ပါတယ် →